Wasaaradda Maaliyada Puntland oo sheegtay in dhawaan ay soo bixi doonaan go’aano ku saabsan adeega EVC - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasaaradda Maaliyada Puntland oo sheegtay in dhawaan ay soo bixi doonaan go’aano ku saabsan adeega EVC
September 12, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Sawirka: Wasiirka Maaliyada Puntland Cabdullaahi Siciid Caarshe.
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa la filayaa in ay dhawaan soo saari doonto sharciyo lagu hagayo adeega lacag ku shubida moobilada ee EVC sida Sahal, sida uu sheegay masuul katirsan dowladda.
Wasiirka Maaliyada Puntland Cabdullaahi Siciid Caarshe oo maanta oo Talaado ganacsatada gobolka Nugaal kulan kula yeeshay gudaha magaalada Garoowe ayaa sheegay in siyaasad ay dowladda uga daganyihiin adeega EVC ayna dhawaan soo bixi doonaan go’aano.
Caarshe ayaan bixin faahfaahin ku saabsan go’aanada, isaga oo carabka ku adkeeyay in aysan cidna dhib ku noqon doonin balse ay dan u yihiin shacabka.
Ilo-wareedyo xog ogaal ah qaarkood ayaa sheegaya in dowladdu ay xadidi doonto muga adeega EVC.
Askari katirsan ciidanka Puntland oo lagu dilay is rasaasayn ka dhacday gobolka Bari
Nairobi-(Puntland Mirror) Booliiska dalka Kenya ee magaalo xeebeedka Mombasa ayaa shalay oo Khamiis ahayd toogtay dilayna labo nin oo ay sheegeen in la doon-doonayay kuwaasoo katirsanaa kooxda al-Shabaab, sida uu sheegay sarkaal sare. Labada nin, [...]